11 months, 1 week ago 826 Qoodi
Walgahiin biyyootaan dureeyyii torbanii, G7 jedhame waamamu dhimma Itiyoophiyaa ilaalchisee ibsa baasee jira. Mata duree "Itti gaafatamummaa fi tarkaanfii addunyaa" jedhu jalattii ibsa baaseen waa’ee haalaa yeroo ammaa Tigiraay keessa jiru kaaseera.
"Haala beela namoottan kumaatamaan lakaaawwan keessaa seenan dabalatee Tigraay keessaatti jeequmsa adeemaa jiruun halli gaddisiisaan namoomaa hedduu nu yaaddeseera."
"Hookkora saalaa dabalatee badiinsa raawatamaa jiru hin balaaleffanna. Wareen yakka raawwatan qorachuudhaan itti gaafatamummaatti dhiheesuudhaaf komishiiniin olaanaan mirga namooma adduunyaa yaalii inni gochaa jiru nu deggarra," kan jedhe ibsi kun, diinummaan atattamaan akka dhaabatu, gargaarsaaf karaan akka banamu, waraanni mootummaa Eertiraa akka Tigiraay keessaa bahu gaafateera.
Gareen hunduu rakina hiikuudhaaf fala isa dhumaa kan ta’ee adeemsa marii siyaasaa dhugaa irratti hunda’e akka gaggeessan, hoggantoonni mootummaa Itiyoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hirmaachisuu danda’u uumudhaan araara biyyooleessaaf waliigaltee buusanii akka mirga namoomaatiif mirga siyaasaa lammiilee Itiyoophiyaa kabajan ibsi kun waamicha taasiseera.
Itoophiyaa Lola Tigraay G7 Eertiraa
June 9, 2021, 12:56 p.m.
Loltootni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti qooda fudhachuu gabaasni UN akeeke
May 30, 2021, 1:22 p.m.
"Loltoonni Eertiraa ummata Lixa Oromiyaa irratti dararaa suukkanneessaa irraan gahaa jiru" - ABO